2 အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော >2အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
မေး-510N စီးရီး2အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော များမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သငျ့လျြောသော ဘို့ အခင်အရှင် နှင့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs တွင် စွန့်စားရသော ပေါကျကှဲခွငျး-အထောက်အထား environment.မေး-510N စီးရီး2အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ရှိ ဖူး mတစ်ဦးsterတွင်g အဆိုပါ နည်းပညာ ၏ အခင်အရှင် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု တွင်dustry ဘို့ ဆယ်စုနှစ်များ။ Choosတွင်g AOX ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ ရှိ first-clတစ်ဦးss ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် pr၏essionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
ခရီးသွားရ Angle 90 ဒီဂရီ +/- 10%
Proximity Sensor ကို: P & F ကို
ပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch သည်သေတ္တာကိုအလွယ်တကူနှင့်တိကျစွာရေးကိရိယာများမပါဘဲသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်မေး-510N စီးရီး2အနေအထားကို၏ cam ။
2. အဆိုပါလူမီနီယံအခွံမေး-510N စီးရီး2အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားစွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းသည်။
3. လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်, အနုပညာနှင့် mounting bracket ကဆက်သွယ်သံမဏိအဓိကဝင်ရိုး NAMUR စံများနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။
1. ကြှနျုပျတို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေး-510N စီးရီး2အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါပေးသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းmaterialsï¼များအတွက်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိသည်။
မေး: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲဆိုတာမေး-510N စီးရီး2အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့နမူနာအကြောင်း?
မေး: မေး-510N စီးရီး2အနေအထားပေါက်ကွဲမှုသက်သေပြန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags::2အနေအထား ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်